ဤတွင် Tai လိုပက်ဇ် Million Dollar ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာကနေအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များသည်!
တည်မြဲသောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဖန်တီးရန်ထူးချွန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်း: Tai လိုပက်ဇ်
ပုဂ္ဂလိကဂျက်မေးခွန်းလွှာ: What’s The Easiest Way To Make Some Extra Cash Part Time?
Tai လိုပက်ဇ်တစ်ဦးက New Lamborghini Aventador လာ & အန္တရာယ်များ $45,000 Backgammon တစ်ဂိမ်းထဲမှာ
တစ်ဦးက Ferrari ပြိုင်ကားဒီအတှကျကောငျး
အဘယ်သို့ငါပြတ်လပ် မှစ. ဝယ်တစ်ဦးက Lamborghini ကထံသို့ ဝင်.
Ferrari ပြိုင်ကား Vs. Lamborghini က: ဘယ်ဟာပိုမြန်ဖြစ်ပါသည်?
နယူး 2016 Rolls Royce. Tai လိုပက်ဇ်. ရုံပို့ပြီးဖြစ်၏စိတ်တိုင်းကျတည်ဆောက်ဝိညာဉ် Series II
ကော်လိုရာဒို Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းမှသည်သို့မဟုတ်စေရန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကိုငှားရမ်း
Bombardier Learjet 75 ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု